» Aqriso Warmurtiyeed laga soo saaray Kulankii Barlamanka Yurub oo looga hadlayo Taageerada EU ee Soomaaliya
DAAWO MUUQAAL AHAAN: IGAD oo sheegtay inaysan sharci ahayn doorashadii Axmed Madoobe iyo Bare Hiiraale
DAAWO SAWIRADA: Diyaarada British Airways oo Maanta ku sigatay in ay Dhacdo kadib markii uu Dab ka Qabsaday Matoorka!! (Daawo Sawirada)
DAAWO VIDEO: Fadeexad qabsatay Haweeneey Kadib markii Ninkeedu u soo galay Iyagoo nin kale la jiifta iyo Ninkii Oo Dabaq iska tuuray
Qalad yar oo xaaskaaga ka dhaco ma mudna in aad u waxyeleyso qalbi qaali ah .( U gaar raga )
Aqriso Warmurtiyeed laga soo saaray Kulankii Barlamanka Yurub oo looga hadlayo Taageerada EU ee Soomaaliya
February 1, 2013 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareKulanki ay yeesheen Baralmanka EU ayaa waxaa laga soo saaray Warmurteed looga hadlayo taageerada Yurub ee Soomaaliya.
Qodoboada War murtiyadedkana waxaa ka mid ah.
1-Midawga Europe waxaa uu soo dhaweeyay ka gudbidii marxalada KMG iyo fursada taariikhiga ah ee ay u heshay Soomaaliya inay ka tilaabto 20 sano oo dagal socday hambaliyo baarlamanka oo dalka gudihiisa ku doortay M/weynaha.
2- Waxaa aan qaban doonaa shir lacago loogu aruurinaayo Soomaaliya waxaana aan amaaneynaa shirkii dhinacyada Soomaalida loogu qabtay Bishii Febraury 2012kii London.
3- Waxaan aan taageersanahay in M/weyne Xasan Shekh Maxamuud uu mudnaanta Koowaad siiyay amaanka oo muhiimad gaar ah leh inagoo sii wadeyna tabarada iyo dib u dhiska Ciidamada dowladda si ay Shabaab ula dagaalamaan.
4 -Waa arrin wanaagsan in dib u eegis lagu sameeyo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya taas oo ay go’aamiyeen R/wasaaraha Soomaaliya iyo danjire Augustina Mahiiga lana kordhiyo dhaqaalaha lagu bixinaayo AMISOM.
5- Midowga Europe waxaa uu soo dhaweynayaa hormarinta dimuqraadiyada iyo dowlad wanaaga.
6- Midowga Europe waxaa uu sii wadayaa gurmad siinta dadka Soomaalida oo sanadkii tagay ay ku bixiyeen 60 Million oo lacagta Yurub ah.
7- Waxaan door muuqda ka qaadanay la dagaalanka burcad badeeda Soomaaliya oo aan sameynay ciidamo badan oo u gaar ah Burcad badeeda.
8- Waxaan aad uga walaacsanahay awooda sii xoogeysaneysa ee argagaxisada Soomaaliya oo weerarada shacabka ku dhibateeyaan.
9- Midawga Yurub waxaa uu aqoonsanayaa in amaanka Soomaaliya uu yahay mid qiimo weyn u leh bulshada Soomaaliyeed iyo wadamada dariska ah gacana uu ka geysan doono sugida amaanka iyadoo lala kaashanayo wadamada ku jira urur goboleedka IGAD.
One Response to Aqriso Warmurtiyeed laga soo saaray Kulankii Barlamanka Yurub oo looga hadlayo Taageerada EU ee Soomaaliya
cabdulkadir Wadani says:	February 2, 2013 at 00:14	war duli waa uun asagii,? Markaad dhadhamiso daacuun la moodka lagu sheego war murtiyeedka gumeeystayaalka yurub meel baas ayuu u fooraraa, bal yaa wax uun ka garan kara ujeedo iyo kajeedo, waxay ka wadaan warkaan jiiska ah,? Calaamo idinka iftay sheeko caruureedka ka liita,
DAAWO MUUQAAL AHAAN: IGAD oo sheegtay inaysan sharci ahayn doorashadii Axmed Madoobe iyo Bare HiiraaleMay 24, 2013
DAAWO SAWIRADA: Diyaarada British Airways oo Maanta ku sigatay in ay Dhacdo kadib markii uu Dab ka Qabsaday Matoorka!! (Daawo Sawirada)May 24, 2013
DAAWO VIDEO: Fadeexad qabsatay Haweeneey Kadib markii Ninkeedu u soo galay Iyagoo nin kale la jiifta iyo Ninkii Oo Dabaq iska tuurayMay 24, 2013
Qalad yar oo xaaskaaga ka dhaco ma mudna in aad u waxyeleyso qalbi qaali ah .( U gaar raga )May 24, 2013